Imithetho Yomncintiswano weCosplay | Izincwadi Zamanje
Kuwebhusayithi ye I-FICOMIC bashicilele izisekelo ze Umncintiswano weCosplay weXIII Manga Salon lokho kuzobungazwa izinsuku Novemba 1 kuya ku-4 ku-L'Hospitalet de Llobregat. Sikukwazisa kusengaphambili ukuze ukwazi ukusebenza kumvunulo. Kulabo kini abangazi, i- Cosplay i-etymologically evela esiNgisini ukudlala imvunulo, umdlalo wezimpahla, uqukethe ukugqoka njengomlingiswa (wangempela noma ophefumulelwe) ovela kumanga, i-anime, i-movie, incwadi noma umdlalo wevidiyo noma abaculi namaqembu omculo nokuzama ukukuhumusha ngangokunokwenzeka. Labo abalandela lo mkhuba baziwa njenge cosplayers.
Lezi yizisekelo ukuthi I-Ficomic ishicilela kuwebhusayithi yayo:
I-Aichi TV neFICOMIC baphinde bahlela umncintiswano osemthethweni eSpain weWorld Cosplay Summit. Laba bobabili abazonqoba bazobamba iqhaza kumdlalo wamanqamu omkhulu ozoba seNagoya, okulindeleke ngo-Agasti 2008, yize izinsuku zingakaqinisekiswa.
Funda izisekelo ngokucophelela. Ukubhaliswa ku-inthanethi kuzoqala ngoLwesithathu, Septhemba 12 kusuka ngo-18: XNUMX ntambama.
1.- Amaqembu ama-cosplayers abamba iqhaza kwi-World Cosplay Summit akhiwa ngabantu ababili. Kuzoba nobuningi be- Amaqembu angama-40 abambe iqhaza.
2. - Umncintiswano osemthethweni weWorld Cosplay Summit 2008 uzoba ngoMgqibelo, Novemba 3 kusukela ngo-16: XNUMX ntambama.
3.- Amaqembu angama-30 azobhalisa online ngokusebenzisa iwebhusayithi ye-FICOMIC. Labo ababhaliswe ku-inthanethi kumele baqinisekise ukubhaliswa kwabo endaweni yokubhalisa esiteji (iPoliesportiu del Centre) ngoMgqibelo ofanayo, ngoNovemba 3 kusuka ngo-10 ekuseni. Isikhathi sokubhalisa nge-inthanethi siphela ngoSepthemba 26 ngo-20: XNUMX ebusuku.
4. - Amaqembu ayi-10 asele kanye namaqembu ayiziqiwi ayi-10 azokwenzela ukukhanselwa okungenzeka azobhalisa ngqo endaweni yokubhalisa esiteji (Poliesportiu del Centre) ngoMgqibelo, Novemba 3 kusuka ngo-10 ekuseni.
5. - Ababambiqhaza kumele bahambise i-CD ngosuku lomqhudelwano i-CD equkethe kuphela itimu yomculo ekhethiwe eqoshwe ngefomethi ye-MP3.
6. - Abahlanganyeli ababhalisile kumele ngabe bazalwa ngaphambi kukaJuni 30, 1990.
7.- Izimpahla zokugqoka kufanele zisekelwe ezinhlamvini ezivela kumageyimu aseJapan, i-anime, noma imidlalo yevidiyo. Imvunulo yamalungu eqembu amabili kumele ngabe ngeyemanga, i-anime noma umdlalo wevidiyo ofanayo.
8.- Izingubo zokugqoka kumele zenziwe ngezandla. Izingubo ezenziwe ngaphambilini noma ezenziwe ngokwezifiso azivunyelwe. Izesekeli noma izingxenye ezenziwe ngaphambilini zingasetshenziselwa ukwenza imvunulo ngumhlanganyeli. Izinto ezenziwe kusengaphambili zingasetshenziswa kuphela uma ngokusobala ziguqulwe ngumhlanganyeli.
Ababambiqhaza kumele benze umdanso ngomculo abazikhethele wona. Isikhathi sokusebenza asikwazi ukwedlula imizuzu emi-2.
10.- Ijaji lizokhetha ngqo abashadikazi abawinile, abazoya kowamanqamu womhlaba eJapan, nalabo ababekwe endaweni yesibili neyesithathu. Abakwa-cosplayers abasezingeni lesibili nabesithathu bazothola iqoqo lemiklomelo ngokuhlonishwa yizinkampani ezisebenzisana nabo.
11.- Abasizi bejaji bazohlola okwakhe, ukunambitheka okuhle, ubuhle nokwenziwa kwemvunulo, kanye nokuhlelwa kwemidwebo nokuhlelwa kwabaqhudelana ekusebenzeni kwabo.
Abaphumelele kumele babe nokutholakala kokuya eJapane isonto lonke futhi babambe iqhaza kwiNgqungquthela Yomhlaba Ye-Cosplay 12 ngezinsuku ebibanjelwe ngazo. Uma kwenzeka iqembu eliphumelelayo lingakwazi ukuya khona, lizothathelwa indawo yiqembu elisendaweni yesibili. Uma engakwazanga nokuya, indawo yakhe ibizohlala abakwa-third classified.
13. - Ngokuhambisana neRoyal Decree 137/1993 kwi-Weapons Regulations, akuvunyelwe neze ukuba ababambiqhaza basebenzise izibhamu, izinsimbi nezinye izinto ezingekho emthethweni noma ukulingisa okungenxa yezici zabo kungaholela ekudidekeni ngemvelo yabo yangempela. Ukusetshenziswa kwezinto eziyingozi ekuthembekeni komzimba kwabantu njenge-pyrotechnic nezinto ezivuthayo nakho akuvunyelwe. Ukulingiswa kwezikhali kupulasitiki, amakhadibhodi nezinye izinto ezingeyona ingozi kwabangenele umncintiswano noma izethameli kuzovunyelwa kuphela.
Inhlangano kanye nejaji banelungelo lokwamukela noma isiphi isinyathelo, ngaphandle kokulawulwa kulezi zisekelo, esinikela empumelelweni enkulu yomncintiswano ngaphandle kwesimangalo esenziwayo.
Ukubamba iqhaza emncintiswaneni kusho ukuhoxiswa okucacile kwanoma yisiphi isimangalo esimelene ne-FICOMIC njengomhleli we-World Cosplay Summit Contest ngaphakathi kweXIII Manga Fair nokwamukelwa ngokuphelele kwemithetho. Noma ikuphi ukungabaza ngokuchazwa kwayo kuzoxazululwa yinhlangano yayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Imincintiswano Nemiklomelo » Imithetho Yomncintiswano weCosplay
Nakhu, nayi, Ingqungquthela ye-Alcorcón